Taabashada Eebbe, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Cidna ima taaban shan sano. Qofna. Nafta bini aadamka majirto. Xaaskeyga maahan. Cunugeyga maahan. Saaxiibbaday maahan. Cidna iima taaban. Way i arkeen. Way ila hadlayeen, waxaan dareemay jacayl codkooda. Indhaheeda ayaan indhaheeda ku arkay. Laakiin ma dareemin taabashadeeda. Waxaan weydiiyay maxaa adiga kuu ah adiga. Is gacan qaad Isku diiran diiran. Garaac garabka si aad u hesho dareenkayga. Dhunkasho bushimaha. Ma jirin waqtiyo sidan oo kale ah adduunyadayda. Cidina kuma dhicin. Maxaan siin lahaa haddii uu qof igu soo boodboodo, haddii aan ku adkaan kari waayey inaan wax horumar ah ka sameeyo burburka, haddii garbihiisu mid kale ku cadayay. Laakiin ma aysan dhicin ilaa shantii. Siday si kale u noqon lahayd? Waa la ii ogolayn wadada. Xitaa rabbaaniyiintu way iga fogaan jireen. Aniga looma ogoleyn sunagogga Xitaa aniga laguma soo dhawayn gurigeyga.
Hal sano, inta lagu gudajiray goos gooska, waxaan dareemay inaan ka qaadi karin jirkayga xooggayga kale. Faraha faraha ayaa umuuqday Muddo yar gudahood ayaan wali iska qaban karay cudurka, laakiin waan dareemi kari waayey. Waxba kama dareemin dhamaadka saacadaha shaqada ee ugu weyn. Gacanta qabtay cudurka waxay sidoo kale lahaan laheyd qof kale - wax dareen ah igama helin. Xaaskayga waxba uma oran, laakiin waan ogahay inay wax ka shakisay. Siday ahaan lahayd haddii kale? Gacantayda ayaa had iyo goorba jirkayga ku haysa, sidii shimbir la dhaawacay oo kale. Maalin galab ah ayaan gacmahayga ku dhex dhacay barkad biyo ah maxaa yeelay waxaan doonayay inaan wejigayga maydho. Biyuhu waxay noqdeen kuwo guduudan. Faraha ayaa dhiigeynayay, xitaa si xoog badan. Xitaa ma ogeyn in la dhaawacay. Sideen isu gooyay? Mindi? Gacmahaygu ma xaashi bir ah baa af leh? Waxay u badan tahay, laakiin waxba ma dareemin. Waxay saaran tahay dharkaaga sidoo kale, naagtaydu si tartiib ah ayey u hadashay. Way iga dambeysay. Intaanan eegin indhaheeda, waxaan fiiriyey wasakhda dhiiga guduudan ee dharkayga. Muddo dheer ayaan balliga dul dul taagnaa oo gacmahayga fiiriyey. Aniga waxaan ogaa in noloshaydu weligeed is beddeshay. Ma waxaan u raacaa wadaadka? Maya, waan calaacalay. Keligay baan aadaa Waan jeestay oo indhaheedii baan ku arkay. Gabadheena saddex jirka ah ayaa ag taagneyd dhinaceeda. Waan jabay, wajigeeda fiiriyey oo aamusnaanta dhabanka ku garaacay. Maxaan dhihi karayay? Waan istaagey oo mar labaad fiiriyey xaaskeyga. Waxay taabatay garabka waxaanna ku qabtey gacantayda caafimaadka qabta. Waxay noqon laheyd xiriirkeena ugu dambeeyay.
Wadaadkii ma i taaban. Wuxuu eegay gacanteyda, oo hadda ku duudduubneyd maro. Wuxuu eegay wajigeyga, oo hadda xanuun badan ku madoobaaday. Kama xanaaqin wuxuu igu yiri. Wuxuu raacay oo keliya tilmaamihiisii. Afkiisii ​​buu daboolay, gacantiina kor ugu taagay, oo calaacalaha u fogeeyey. Waxaad tahay qof nijaas ah, wuxuu igu yiri. Bayaankan keliya, waxaan ku waayey qoyskeyga, beertayda, mustaqbalkeyga, asxaabtayda. Naagtaydu waxay iigu timid irridda magaalada iyadoo joonyad kibis iyo qalin ku jirta. Waxay tidhi waxba. Asxaabta qaar baa soo urursaday. Indhaheeda waxaan markii ugu horreeyay ku arkay wixii aan ku arkay indhaha oo dhan ilaa wakhtigaas: Naxdin cabsi. Markii aan qaaday tallaabo, dib ayey u kaceen. Cabsidii ay ka qabeen jirradaydu waxay ka weynaatay walaaca ay ku qabaan qalbigeyga - sidaa darteed way iscasileen, sida qof kasta oo kale oo aan arkay tan iyo markaas. Imisa ayaan u diidey kuwii i arkay. Shan sano oo baras ah ayaa gacmahayga itaal darroobay. Faraha ayaa ka maqnaa iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dhegta iyo sanka. Markii aan arkay, aabbayaashu carruurtoodii bay heleen. Hooyooyinka ayaa wejiga ka daboolay. Carruurtu way i tilmaameen oo i fiirsadeen. Dharka jirkayga ma uu qarin karin nabarkayga. Dharkii wejigayga ku jirayna indhahayga kuma qarin karin cadhadayda. Xitaa iskuma dayin inaan qariyo. Immisa fiidmee ayaan jilbaha gacanta i galiyay cirka aamusnaanta? Bal maxaan sameeyey si aan ugu qalmo tan? Laakiin jawaabtu waligeed ma imaan. Qaar baa u haysta in aan dembaabay. Qaar kale waxay u maleynayaan inay waalidkey dembaabeen. Kaliya waxaan ogahay in waxkasta iga filnaa, hurdada laga soo bilaabo gumeysiga, urinta xun. Waxaa igu filan gadhka habaarka ah ee aan qoorta u sudhan jiray si aan uga digayo dadka joogitaankeyga. Sida haddii aan u baahday. Hal indhood ayaa ku filan oo wicitaannadu waxay bilaabeen: Saar! Nijaasoobay! Nijaasoobay!
Dhowr usbuuc ka hor waxaan ku qasbay inaan socod ku maro jidka ilaa tuuladayda. Ujeeddadiisu ma lahayn inaan tuulada galo. Kaliya waxaan doonayay inaan aragti kale ka fiiriyo beertayda. Gurigayga mar kale fiiri. Oo waxaa laga yaabaa in si shil ah u arko wejiga xaaskayga. Maan arkin. Laakiin waxaan arkay carruurta qaar oo ku ciyaaraaya doog. Waxaan qariyey geed gadaashiisa ah oo waxaan daawaday iyagoo xanaaqsan oo hareeraha ka boodaya. Wejiyadoodu aad bay u faraxsanaayeen oo qosolkooduna way u faafeen oo anigu ma aan baras lahayn daqiiqad, daqiiqad uun. Waxaan ahaa nin beeraley ah. Aabe waxaan ahaa. Waxaan ahaa nin. Injirsanaantooda farxadeed, waan ka dhaqaaqay geedka gadaashiisa, dhabarkayga waan kala fidiyey, waxaan qaatay neef qoto dheer ... wayna i arkeen. Way i arkeen kahor intaanan howlgab noqon. Wayna qayliyeen oo carareen. Si kastaba ha noqotee, mid ayaa ka danbeeya kuwa kale. Mid baa istaagay oo fiiriyey jihadahayga. Xaqiiqdii ma dhihi karo, laakiin waxaan u maleynayaa inay haa tahay runtii waxaan u maleynayaa inay ahayd gabadhayda. Waxaan u maleynayaa inay raadineysay aabaheed.
Muuqaalkaas ayaa iga dhigay tallaabada aan maanta qaaday. Dabcan waxay ahayd taxadar la'aan. Dabcan waxay ahayd halis. Laakiin maxaa igu khasbay? Isagu wuxuu isu yeedhay wiilkiisii ​​Ilaah. Isna wuu maqli doonaa cabashadayda, wuuna i dili doonaa, amase wuu maqli doonaa baryootankayga, wuuna i bogsiin doonaa. Taasi waxay ahayd fikradayda. Waxaan ugu imid nin tartan adag. Waxa aan rumeysanayn ayaa i kiciyay, laakiin xanaaq quus ah Ilaah masiibo buu jidhkayga ku dhex abuuray isaguna wuu bogsiin doonaa ama noloshaydana waan dhammayn lahaa.
Laakiin markaa waan arkay oo markii aan arkayna waa la beddelay. Waxaan dhihi karaa oo keliya in subaxnimada Yahuudiya mararka qaar ay aad u cusub tahay iyo qorraxdu soo baxdo oo ay sharaf badan tahay inaadan xitaa ka fikirin kuleylka maalintaadii la soo dhaafay iyo xanuunkii hore. Markaan wejigiisa fiiriyey, wuxuu u ekaa sidii waagii hore oo Yahuudiya oo kale. Inta uusan oran wax, Waan ogaa inuu i dareemayo. Aniga waxaan ogaa inuu aad u necbahay cudurka sida aan u bartay - maya, in ka badan waan ka necbahay. Cadhadaydii waxay noqotay mid aamin ah, Cadhadaydiina waxay u rogmatay rajo.
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Isagoo ku dhuunanaya dhagaxa gadaashiisa, Waxaan fiiriyey isagoo buurta ka soo degaya. Dad aad u badan ayaa raacay. Waan sugayay illaa uu dhowr tallaabo iga fog yahay, ka dibna waan ka baxay. Macallin! Wuxuu istaagay oo fiiriyey jihadahayga, iyo kuwa kale ee aan tira lahayn. Dadkii badnaa aad bay u baqeen. Qof kasta wejigeeda waxay ku qarisay gacanteedii. Carruurtu waalidkood gadaal ayey ka noqdeen. "Saar!" Qof baa qayliyey. Kama xanaaqi karo taas taas. Waxaan ahaa geerida socodka. Laakiin si dhib yar baan u maqlay. Waan adkaystay inaan arkay. Waxaan arkay argagax kun jeer kahor. Hase yeeshe waligey ma arkin naxariistiisa. Qof kasta ayaa is casilay marka laga reebo isaga. Wuu ii yimid. Ma dhaqaaqin.
Waxaan idhi: Sayidow waad i bogsiin kartaa hadaad rabto. Haduu isagu igu bogsiin lahaa hal eray, waan farxi lahaa. Laakiin kaliya ilama uusan hadlin. Taasi kuma filna isaga. Wuu ii soo dhowaaday. Wuu i taabtay. "Waxaan rabaa!" Erayaashiisu waxay u ekaayeen sida uu u taabto. Caafimaad qab! Xooggaygu dhex maray jidhkayga sidii biyo oo kale dhul engegan. Daqiiqadaas waxaan dareemay diirimaad meesha kabuubyadu ka jirto. Waxaan dareemay xoog jirkeygii ku yaraaday. Dhabarka ayaan u taagay oo madaxayga kor u qaaday. Haddaba aniguna wejigiisii ​​waan fiiriyey, oo wejigiisay fiiriyey, oo fool ka fool baan ahaa. Wuu dhoola cadeeyay. Wuxuu madaxa iga qabtay gacmihiisa oo wuu i soo jiiday si aan u dareemo neefsashadiisa diiran oo aan arko indhihiisa indhihiisa. Hubso inaadan qofna u sheegin waxna, laakiin u tag wadaadka, oo ha daayo bogsashada oo ha bixiyo allabarigii Muuse amray. Kuwa masuulka ka ah waa inay ogaadaan inaan sharciga si dhab ah u qaato. Waxaan hadda u socdaa inaan wadaad noqdo. Waan is tusi doonaa isaga oo isku xifdin doona. Naagtayda waan tusi doonaa oo waan isqabin doonaa. Gabadhayda waxaan ku qaadi doonaa gacmahayga. Weligana ma hilmaami doono kii igu dhiirrigeliyay inuu i taabto. Hal eray ayuu igu bogsan lahaa. Laakiin kaliya ma uusan dooneynin inuu i caafimaado. Wuxuu doonayay inuu i sharfo, i siiyo qiimo, wuxuu igu dhexgalaa wadaagis isaga lala yeesho. Qiyaas inaadan taaban dad bini aadam ah, laakiin u qalma taabashada Ilaah.
Max Lucado (Markuu Eebbe beddelo noloshaada!)